Ravoravo amin’ny fanombohan’ny Mondialy ny Rosiana, na dia hoavy aza ny fanavaozana ny retirety sy ny hetra · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 20 Jona 2018 5:13 GMT
Vakio amin'ny teny Português, Español, Français, Italiano, English
Nanomboka tamin'ny 14 Jona 2018 tamin'ny fomba ofisialy ny fiadiana ny amboara eran-tany, izay anantenan'ny mpikarakara ahazoan'i Rosia mpitsidika iray tapitrisa na dia firenena maro aza no namoaka fampitandremana ho an'ny mpitsidika amin'ity taona ity manoloana ny mpampiatrano.
Nitatitra ny sasany tamin'ireo mpitsidika ireo fa nahataitra ny fotodrafitrasa tao Moskoa, toerana nanombohan'ny fifanintsanana. Tamin'ny nandrotsahan'ny manampahefana vola an-tapitrisany robla hanavaozana ny tanandehibe nandritra ny taona maromaro, dia tsy tokony atao mahagaga loatra izany.
Tahaka ny hafa rehetra manerana izao tontolo izao, toa mankafy ny mpanohana peroviana manokana izy ireo – tsy nandray anjara tamin'ny mondialy ity ekipa Amerikana Tatsimo ity hatramin'ny fifaninanana taona 1982 tany Espaina.
Nitatitra ireo mpianatra fa iharan'ny fanohintohinana avy amin'ireo manampahefana misahana ny fiarovam-panjakana sy ny fitantanana ny sekoly nandritra ry zareo nandritra ny fanentanana izay nahitana fahombiazana ihany: nanaiky ny hamindra ny faritra ho an'ny mpankafy ho any amin'ny anjatony metatra lavitra kokoa noho ny nomanina voalohany ny mpikarakara, na dia mbola ao amin'ny oniversite hatrany aza izany ara-teknika.
Amin'ny alàlan'ny fanamarihana maivamaivana kokoa, nisy mpizahatany iray voafandrika tao amin'ny trano fidiovana iray zara fa vita izy, izay toa misy itovitovizana amin'ny tantara ratsin'ny efitra fandroana roa tao Sochi tamin'ny taona 2014:
Andro vitsivitsy monja talohan'ny fiaingan'ny lalao, nisy mpifahatra nandeha samirery nosamborina noho ny fitazonana afisy iray nilaza hoe: “Amin'ny Fetin'i Rosia, mangataka fahalalahana isika. Tonga ny Revolisiona. Ataovy ankivy ny mondialy. “
Rehefa nahenoana tsaho hatry ny ela fa efa eo am-pikononana, nanambara tamin'ny fomba ofisialy ny fikasany ny governemanta Rosiana fa hampakatra ny taona fisotroan-dronono kely indrindra ho 65 taona ho an'ny lehilahy ary 63 ho an'ny vehivavy. Ny taona fisotroan-dronono amin'izao fotoana dia 60 taona ho an'ny lehilahy ary 55 taona ho an'ny vehivavy.
Mifarana amin'ny faha-15 Jolay ny fiadiana ny amboara erantany, ahitana ireo lalao 64 tontosaina amin'ny tanàna miisa 11 any Rosia – ity no torolàlana ho an'ny tantara sy kolontsaina amin'izy ireo tsirairay avy.